အိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်နှင့်၎င်း၏ကျွန်းများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ဂရိနိုင်ငံ, ကျွန်းများ
အားလပ်ရက်မှာ ဂရိနိုင်ငံ တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကုန်းမကြီးမှကျွန်းများသို့ခုန်ချကာဤကိစ္စတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ လှပသောကျွန်းများရှိပြီးကျွန်းများလည်းပါ ၀ င်သည် Ionian ပင်လယ်၏ဂရိကျွန်းများ၊ ယခင်ကဂရိနှင့်ရောမတို့အကြားအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်မြေထဲပင်လယ်တစ်ခု၏လက်ရုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်၎င်းတွင်ရှိခဲ့သောသမိုင်းအပြင်၊ ယနေ့တွင်၎င်း၏လှပသောကျွန်းများသည်သူတို့၏အလင်းရောင်နှင့်အတူတောက်ပနေသည်။ ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိကြစို့ ငါတို့လည်ပတ်ကြည့်ရှုခံစားနိုင် ဒီမှာ။
ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မြေထဲပင်လယ်၏လက်ရုံး ၎င်းသည် Adriatic ပင်လယ်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင်အီတလီနှင့်တောင်ဘက်အယ်လ်ဘေးနီးယားတို့သည်ယနေ့ခေတ်နှင့်ဂရိနိုင်ငံကိုခေါ်ယူသောကျွန်းများဖြစ်သည်။ အိုင်ဆိုနီးယန်းပင်လယ်သည်မက်ဆီနားရေလက်ကြားမှတဆင့်၊ ကုန်းတွင်းပင်လယ်နှင့် Otranto ချန်နယ်မှတဆင့် Adriatic ပင်လယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကရှေးအချိန်ကဤပင်လယ်အားပိုပိုပင်လယ်ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်၎င်းမတိုင်မှီကခရွန်နပ်စ်နှင့်ရီယာပင်လယ်များလည်းရှိသည်။ သူ၏နာမ၏မူလအစနှင့်ပတ်သက်။ ထင်မြင်ချက်များအများအပြားရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အထက်မှကြည့်ပါ အိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်သည်တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည် တောင်ပိုင်းကိုအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်မြေထဲပင်လယ်ဟာအမြင့်ဆုံးနက်ရှိုင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ ရှည်လျားပြီးကြီးမားတဲ့ချောက်ကြီးတောင်မှအာဖရိကပန်းကန်နဲ့နယ်နိမိတ်ကိုမှတ်သားထားတယ်။ ဒီကနေ ငလျင်လှုပ် ဧရိယာ။
ကျွန်းများ၏အနေအထားအရအိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်အားပထဝီအနေအထားအရမြောက်မှတောင်သို့ဟီမာရာပင်လယ်၊ Corefu ပင်လယ်၊ ပါကော့စ်ပင်လယ်၊ Tilevois ပင်လယ်၊ Echinades ပင်လယ်၊ Kythira ပင်လယ်။
သူတို့ကဒီစိမ်းနှင့်အပြာပင်လယ်၏ပုလဲဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်းများသည်ပထဝီအနေအထားများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေသောအသီးအရွက်များနှင့်ဘုရားသခင့်ကမ်းခြေများရှိသည်။ အိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်၏ကျွန်းများဖြစ်ကြသည် Corfu, Ithaca, Kefalonia, Kythira, Lefkada, Paxos နှင့် Zakynthos။ ဤရွေ့ကား Ionian ပင်လယ်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုစဉ်းစားသောအခါသင်ရွေးချယ်ရမည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ
Corfu များစွာသောကျွန်းများအတွက်အဓိကကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် အလှဆုံးကျွန်း တိုင်းပြည်ကနေ။ မိုးအများကြီးရွာလို့ဒါပဲ စိမ်းလန်းသောကျွန်း ဘာရီ၊ အီတလီ၊ ဗင်းနစ်သို့မဟုတ်အန်ကိုနာတို့မှအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်အီတလီကနေဂရိကိုကူးသွားရင်ဒီလမ်းကြောင်းဟာမင်းရဲ့ပထမဆုံးဂရိနယ်မြေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီမှာမင်းမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ်းခြေကလှည့်နေတုန်းပဲ စူပါခရီးသွား။ ည့်သည် ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်သင်ရိုက်နှက်နေသောလမ်းကြောင်းပေါ်မှသာယာလှပသည့်ကျေးရွာများကိုတွေ့ရသည်။
အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေတွင်အယ်လ်ဘေးနီးယားနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည် coves နှင့်ကျောက်စရစ်ခဲကမ်းခြေအနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှုခင်းသည်အလွန်ချောမွေ့သော်လည်းပြတ်သားသည်မဟုတ်ပါ။ \_ t ကမ်းပါးနှင့်ပင်လယ်အော် အများကြီးပိုပွင့်လင်း။ လူအနည်းငယ်သာသင်လိုချင်သည်ဆိုပါကအနောက်မြောက်ဖျားတွင်သဲသောင်ပြင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလူနေထိုင်မှုမရှိသည့်ကျွန်းငယ်သုံးကျွန်းရှိသည်။
Ithaca ကျော်ကြားသည် odysseus ကျွန်း။ Isaတောင်တန်းကျွန်း နေရာတိုင်းကျောက်နှင့်ကျောက်အများကြီးနှင့်အတူ သံလွင်ပင်များ။ အများကြီးရှိပါတယ် ရှေးဟောင်းသုတေသနအပျက်အယွင်း, ငါးဖမ်းကျေးရွာများနှင့်ကမ်းခြေ။ ၎င်းတွင်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းများစွာရှိပြီးမြို့တော်ဗက်တီသည်လှပသောမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ တိုတိုပြောရရင် Ithaca ဆိုတာပါပဲ တောင်တက်ဘို့စံပြ သေးငယ်ပြီးကြီးမားသောကမ်းခြေများရှိသည်။
Kefalonia ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်ကြီးမားသောမြေငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ဒေသခံများနေထိုင်ရန်အခြားနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့လူ ဦး ရေတွင်ဗြိတိန်၊ အီတလီနှင့်အမေရိကန်များရှိသည်။ Isaဂူများနှင့်မြေအောက်ရေကန်များနှင့်အတူအလွန်ကြီးမားကျွန်း နှင့်ကောင်းမွန်သောကမ်းခြေ။ Argostoli သည်၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးပွဲကြည့်စင်နှင့်တူသည်။ ဒီမှာပါ Fiscardoဂရိတစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလှဆုံးကျေးရွာများအနက်တစ်ခုနှင့်ကျွန်းသည်များသောအားဖြင့်သဘာ ၀ သင်္ချိုင်းတွင်းအတွက်အများအားဖြင့်ရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ် ဗိုလ်ကြီး Corelli ရဲ့ mandolin? ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာရိုက်ကူးထားတယ်။
Kythira ၎င်းသည်ချမ်းသာသောအေသင်မြို့သားများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ တည်ရှိပါတယ် Peloponnese ၏တောင်ဘက် ထိုမြို့မှကရိကျွန်းသို့၎င်း၊ ကရေတေကျွန်း၌၎င်းသွားကြ၏။ ရာသီဥတုအမြင့်တွင်အထူးသဖြင့်သြဂုတ်လတွင်နေရာထိုင်ခင်းရှာရန်ခက်ခဲသော်လည်းသင်ရာသီမထွက်လျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်နေဆဲဖြစ်သည် အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းပိတ်ထား အေဂျင်စီများကစုစည်းထားခြင်းကြောင့်သင်သိလိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်သွားသင့်သည်။
လည်း ဒါဟာသမိုင်းအများကြီးရှိပါတယ် ၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်ရေကြောင်းတည်နေရာကတည်းကကုန်သည်များနှင့်အောင်နိုင်သူကတဆင့်သွားစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ၁၃ ရာစုဘိုင်ဇင်တိုင်းနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများကိုတောင်ထိပ်ရှိ Minoan ယဉ်ကျေးမှုမှဂူသို့မဟုတ်ကြေးဝါရုပ်တုများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သမိုင်းနှင့်ကမ်းခြေများ၊ အလွန်ကောင်းသည့်ပေါင်းစပ်ခြင်း!
လက်ဖကာဒါသည်ပြည်မကြီးနှင့်တံတားတစ်ခုဆက်သွယ်ထားသည် တူးမြောင်းကိုကျော်ဖြတ်သန်းသွားတယ် ကျွန်းပေါ်ရှိခရီးသွား most ည့်အများဆုံးကျေးရွာသည်နီဒီရီဖြစ်ပြီး၎င်းမှကျော်ကြားသောကျွန်းကဲ့သို့သောကျွန်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်လှေတစ်စီးစီးနိုင်သည်။ Aristotle Onassis အားဖြင့် Skorpio ကျွန်း။ အကယ်၍ သင့်တွင်ညတစ်ညမရှိပါကအေသင်၌ terminal တစ်ခု၌ကြိမ်နှုန်းသုံးခုဖြင့်ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်သည်။ ၅ နာရီခွဲလောက်ယူပြီးယူရို ၃၀ လောက်ရတယ်။
Lefkada တွင်၎င်း၏ကမ်းခြေများရှိသော်လည်းပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွန်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ သူ့အဘို့ Paxos ဟာ Corfu ရဲ့အိမ်နီးချင်းပါ။ ဒါပေမယ့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသိပ်မများပါဘူး။ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူ ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် တစ်ရက်ခရီး သင်ကြိုက်သည့်အတိုင်း Corfu မှဖြစ်သည်။ ၁၃ ကီလိုမီတာသာရှည်သောကျွန်းငယ်တစ်ကျွန်းဖြစ်သည် သာလှေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်ရှေးဟောင်း Venetian ရှိခံတပ်တည်ရှိပြီးအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းရှိကမ်းခြေများသည်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများသာဖြစ်သည်။ သို့သော်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရှိလူများသည်မြင့်မားသောချောက်ကမ်းပါးများနှင့်ဂူများရှိပြီး ၄၀ ပတ်ပတ်လည်တွင်သာလှေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ပုံတွေကမ္ဘာကြီးကိုမမေ့နိုင်စရာတစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်း \_ t Zakynthos။ ၎င်း၏ကမ်းခြေတစ်ခုတွင်သင်္ဘောပျက်တစ်ခုရှိပြီးကုန်တင်သင်္ဘော၏အကြွင်းအကျန်များသည်လှိုင်းများစီးဆင်းနေချိန်တွင်လူတိုင်းကိုစိတ်ပူစေခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်းအားကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အခြားကမ်းရိုးတန်းမှာ Caretta - Caretta ပင်လယ်လိပ်အတွက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းရှိကြောင်းထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဥများကိုနေရာချကြတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » ဂရိနိုင်ငံ » အိုင်အိုနီးယန်းပင်လယ်နှင့်၎င်း၏ကျွန်းများ